Monday March 04, 2019 - 21:10:25 in Wararka by Super Admin
Ciidamada Kenya oo muddo ku dhow 10 sannadood hestay degaanka Faxfaxdhuun ee gobolka Gedo ayaa 02-03-2019 isaga huleelay saldhiggii ay degganaayeen, halkaas oo durbadiiba ay dib ula wareegtay Xarakada Al-Shabaab.
Kenyaatiga ayaa xerada ka tagay iyadoo sideedii u dhisan iyo qaar kamid ah agabyadoodii waxaana loo fasiran karaa in bixitaankoodu uu si degdeg ah ku yimid ama baqdin soo wajahday maadaama ciidamada Xarakada Al-Shabaab ay hadda ka hor soo af-jareen xeryo ay ciidamada Kenya degganaayeen sida Ceelcadde iyo Kulbiyoow.
Sawirradan ayaa waxaa laga dheehanayaa culeys millatari oo halkan ku heystay askarta Kenya sababtoo ah waxay dhisteen difaacyo badan oo dhaadheer oo juhdi iyo dhaqaale badan uu ku baxay, Intaa waxa dheer oo uu mid kamid ah sawirrada muujinayaa in ay xaalufiyeen dhirtii ku tiilay dhowr KM oo ku hareereysan.
Intaa waxaa dheer oo ay muuqaaladan ku tusayaan raashin iyo wax yaabo kale oo ay ka carareen, waxaad arkeysaa fuustooyin iyo digsiyadii ay wax ku karsanayeen iyo gaari laga gubay oo ay qalfooftiisu meesha u taallo.
Askarta Kenya ma lahayn Suulli (Musqul) taa badalkeedana waxay ku xaajo gudan jireen qeybo kamid ah difaacyadoodii, Wariyaasheenii meesha tagay waxay dareemayeen ur badan, waxayna dabcan xeradan u baahan tahay nadaafad.
Afhayeenka ciidamada Xarakada Al-Shabaab oo shir jaraa’id qabtay dorraad ayaa sheegay in ciidamada Kenya ee Gedo ku sugnaa ay haatan ku hareen oo kaliya degaanka Buusaar halkaasoo wararkii ugu dambeeyay ee laga helay ay sheegayaan iney wadaan dhaqdhaqaaq bixitaan.